महत्त्वाकांक्षी वान बेल्ट वान रोड: सत्य कि भ्रम ? - Karobar National Economic Daily
महत्त्वाकांक्षी वान बेल्ट वान रोड: सत्य कि भ्रम ?
query_builderMay 9, 2017 11:01 AM supervisor_accountडा. अतीन्द्र दाहाल visibility4516
विख्यात लेखक शिभ खेरा भन्छन्ः मानिसहरू स्वभावैले प्रगति-समुन्नति सोच्छन् र सफलता चाहन्छन् । आफैँले उल्लेख्य सफलता नपाएचाहिँ आफ्ना सन्तानहरूबाट आशातीत सफलताको आत्मरतिमा हराउँछन् ।
आफूमा नभै अरूमाथि आश गर्न थाल्छन् । अहिले हाम्रो देशको आर्थिक अवस्था यस्तै छ । आर्थिक विकासका अपार सम्भावना छन् । जलस्रोत, पर्यटन, कृषिलगायत उद्योग र व्यापारका अनेकन बहुआयामिक सम्भाव्यता प्रचुर छन् ।
उद्योगी विनोद चौधरी अनि पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यलगायत अरूका विभिन्न पुस्तकले समेत सम्भावनाका सघन खोज र सोच बताउँछन् । यद्यपि हामीचाहिँ कहिले भारत, कहिले विप्रेषण अनि कहिले चीनको साथ लिएर समृद्घिको सपना देख्न खोज्छौँ ।
यस्तै सपनाको खोजीमा अहिले चीनले अघि सारेको ‘एक पेटी एक बाटो’ अथवा ‘वान बेल्ट वान रोड’माथि गरमागर्मी बहसपैरवी हुँदै छ । यही वैशाख ३१ गते चीनले एक भव्य समारोहबीच यस परियोजनाको उद्घाटनसमेत गर्दैछ ।
अनि चीनले प्रक्षेपित गरेको त्यो महत्त्वकांक्षी बाटो हाम्रो देश भएरै गए पनि हामी सामान बोकेर कुद्ने गाडी गनेर समय बिताउँछौँ कि अन्य केही पठाउँछौँ ? यो योजनामा पर्ने प्रत्येक देशमा चीनले पूर्वाधार विकास गर्न ५० अर्ब डलर खर्चन चाहन्छ ।
ओबर भनिने यो योजनाबाट नेपालको कायापलट हुने भएकाले यसमा तत्कालै सहभागी हुनुपर्छ, अन्यथा हामी कहिल्यै विकसित हुँदैनौँ भन्ने तर्कसमेत सुनिन्छन् । तर, ओबरमा भाग लिनुपर्छ कि पर्दैन भनेर पूर्वाग्रही तर्कवितर्कका भीमकाय गर्जन ओकल्नु पहिले यसको पक्ष-विपक्षको सूक्ष्म चिरफार हुर्नुपर्छ ।
आर्थिक विकास कुनै पनि देशको पहिलो लक्ष्य हो । न्यायिक आर्थिक विकासले मात्र नागरिकलाई अन्य अधिकार र विकासहरूको प्रत्याभूति दिन्छ । चीनले सन् २००० पछि सशक्त अर्थतन्त्र भएर उदाउँदै सम्पूर्ण देशको ध्यान खिच्यो । २००८ पछि युरोप र अमेरिकाले आर्थिक मन्दी झेल्दै गर्दा विश्व बजारमा सस्ता सामानहरूको उच्च आपूर्तिबाट आर्थिक हैसियत बढायो ।
तर, केही समयदेखि उसको आर्थिक प्रगति घट्दै छ । झन्डै १३ प्रतिशतसम्मको वृद्धि भएकोमा अहिले औसतमा ७ को हाराहारीमा झर्दै छ । यसलाई फेरि उकास्दै विश्व बजारमा आफ्नो हैकम कायम राख्न चीनले अगाडि सारेको एक सशक्त योजना हो ओबर ।
आदिकालमा इसापूर्व १३० तिर हान वंशको शासनका बेलासमेत चीनको व्यापार अहिलेको भारत, अरब, ग्रिस हुँदै अन्य युरोपियन देशहरूसम्म पुगेको थियो । वाणिज्य प्रयोजनमा प्रयोग भएको त्यो स्थलमार्गलाई चीनले रेसमी मार्ग अथवा शिल्करोड भन्छ । आधुनिक चीनसमेत १९९० पछि अन्तराष्ट्रिय व्यापार तथा लगानीमा आक्रामक बन्यो ।
चाइना बिजिनेस रिभ्युका अनुसार २००० ताका १ खर्ब अमेरिकी डलरभन्दा कम रहेको चीनको वैदेशिक लगानी आज ५०० गुणाभन्दा बढी छ । अन्तरदेशीय व्यापार यस्ता लगानीको प्रमुख ध्येय हो । चीनको अगुवाइ रहेका ‘एसियाली भौतिक संरचना निर्माण बैंक’ र पहिले ब्रिक्स भनिने ‘एनडीबी’ नामक आयोजनाहरू यसैका लागि हुन् ।
तर, यो आधुनिक समयमा स्थलभन्दा जलमार्गबाट हुने व्यापार समय र खर्च दुवैका हिसाबले किफायती हुन्छ । तसर्थ, परापूर्व कालको स्थलमार्ग र अहिलेको जलमार्ग दुवैलाई समेटेर विश्वभर व्यापार गर्न एउटा निश्चित क्षेत्र तथा मार्ग तोक्ने गरी राष्ट्रपतिले यस्तो योजना ल्याए । २०१३ मा काजकास्थन र इन्डोनेसिया भ्रमणका बेला उद्घोष गरे, भ्रमणपछि चीनको कम्युनिस्ट पार्टीले यसलाई स्वीकार्‍यो ।
त्यो अनुसार पूर्वाधार निर्माण गर्न हामी समर्थ छौँ कि छैनौँ ? जनशक्ति हाम्रो लाग्छ कि उतैबाट आउँछन् ? त्यो बाटो भएर हामी पनि चीनसँगै अन्य देशमा हाम्रा उत्पादनहरू कसरी पठाउँछौँ । विश्व व्यापरको ७८ र आयातको ९० प्रतिशत हिस्सा भारतसँग मात्र भएको असन्तुलित हाम्रो व्यापारलाई यो परियोजनाले कसरी सन्तुलित र नाफामुखी बन्न सघाउँछ ?
आज चीन विश्वभर यसैको बारेमा छलफलमा छ । उसले प्रक्षेपित गरेको पेटी र बाटोभित्र ७० देश पर्छन्, ३० वटासँग सम्झौता भइसकेको छ । हस्ताक्षर गर्ने पहिलो देश न्युजिल्यान्ड हो । यो परियोजनाअन्तर्गत झन्डै १० खर्ब डलर बराबरको पूर्वाधार निर्माण बन्दै छन् ।
बेइजिङदेखि जर्मनीको टन्सवर्ग रेलमार्ग निर्माण थालनी यसको उदाहरण हो । २०१६ सम्ममा यही परियोजनाका लागि चीनले विभिन्न देशमा ५२ वटा आर्थिक सहकारी खोलेको देखिन्छ ।
सम्बन्धित सरकारहरूलाई ९ अर्ब डलर कर तिरेको, ७० हजार मानिसलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको अनि ४ हजार इन्जिनियरिङ परियोजनामा सम्झौता भएको देखिन्छ । विशेष गरी युरोप र अफ्रिकामा बजार विस्तार गर्न सुरक्षित र भरपर्दो पारवहनको खोजीमा छ ।
आफ्नो देशको आर्थिक प्रगतिलाई चुस्त राख्न व्यापार गर्नु र त्यसको यथेष्ठ वृद्घिका महत्त्वाकांक्षी योजना बनाउँदै छिमेकीसँग सहज वातावरण खोज्नु उसको स्वतन्त्रताको विषय हो ।
भूगोल र मन दुवै हिसाबले हाम्रो छिमेकी मित्र भएका कारण चीन अवश्य नेपालको विकास चाहन्छ । भर्खरै भएको लगानी सम्मेलनमा पनि उसले सबैभन्दा धेरै ८ खर्ब बराबरको लगानीको इच्छा जाहेर गर्‍यो ।
अहिले पनि अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, काठमाडौं चक्रपथलगायत उद्योग, स्वास्थ्य तथा शिक्षाका विभिन्न परियोजनामा चीनको प्रशस्त सहयोग छ । भूकम्प र नाकाबन्दीका बेला उसले गरेको सहयोगको सराहना गर्नैपर्छ । उसलाई समेत नेपालको आर्थिक विकास तथा स्थिरताको आवश्यकता छ ।
सफल र स्थिर नेपाल चीनको सुरक्षाको समेत आवश्यकता हो । तसर्थ, चीन आफ्ना कुनै पनि योजनाले नेपालको यो खोजीलाई केही सघाओस् भन्ने चाहन्छ । तर, केवल बाटोले मात्र केही हुँदैन, मुख्य कुरा बाटो हाम्रो देश भएर जान्छ कि जाँदैन ? परियोजनामा हाम्रा कुन-कुन भूभाग पर्छन् ?
त्यो बाटोभित्र पर्ने हाम्रा ट्रान्जिट स्थानहरूमा कर असुली तथा फछ्र्योट गर्न अहिलेको बैंकिङ प्रणाली र त्यसका जनशक्तिहरू पर्याप्त अनि दक्ष छन् कि छैनन् ? कसरी हामी नेपाललाई पनि त्यो पूरै पेटीको आकर्षणमा राख्न सक्छौँ ? यहाँको स्रोत साधनमाथि समेत अरूको हैकम हुने त होइन ?
अनि ठूला–ठूला गाडी कुद्ने विशाल चिल्ला राजमार्गका छेउमा भएका तर केवल ध्वनि र धूलो प्रदूषणमात्र खेप्नु पर्ने घरहरू जस्तो अवस्था त आउँदैन ? सहजै अन्य देशका सामान पनि पाइने भएपछि हाम्रो आफ्नो उत्पादन अझै गिरावट त हुँदैन ? चीनले हामीलाई सामान बेच्छ कि हामीसमेत अरूलाई बेच्छौँ ?
चीनसँगसँगै विश्वबजारमा हामीले के–के सामग्री निर्यात गर्न सक्छौँ ? त्यसको उत्पादन अवस्था के छ ? चीनको योजनाले कसरी हाम्रो सशक्तीकरणमा सघाउँछ ? अरू देशले आफ्नो व्यापार प्रवद्र्धनका लागि कुनै योजना ल्याउँदा हाम्रो हितचाहिँ कति सुरक्षित छ ? उसको सजिलोका लागि नभई हाम्रो विकासका लागि यसमा के सम्भावना रहन्छ ?
अहिले पनि नेपाल सार्क, बिमस्टेक, विश्व व्यापार संगठनलगायतका विभिन्न व्यापार तथा वाणिज्यसँग सम्बन्धित संगठनमा सदस्य छँदै छ । यीबाट हामीले के फाइदा पायौँ ? ओबरमा सहभागिताले हाम्रोमा कसरी उद्योगधन्दाको प्रवद्र्धन हुन्छ र उत्पादन बढ्छ ? अनि रोजगारी तथा आयमूलक सोच र व्यवहारलाई कुन–कुन पक्षमा फस्टाउन सकिन्छ ?
यी पक्षहरूका बारेमा वास्तविक र वस्तुगत अध्ययन गर्नुपर्छ । केही विकासको सम्भावना नभए समय खर्च नगरौँ । तर, त्यसबाट साँच्चै विकास आउँछ भने त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा फेरि भोलि विदेशीहरूकै उपस्थिति हुन सक्छ । आज गरिबीले थिचिएजस्तै भोलि विकासले थिचिएर निस्सासिने अवस्था आउन सक्छ । हतार नगरौँ, तर ढिला पनि नगरौँ ।
नेपाल चीन वान बेल्ट वान रोड ओबीओआर